Diplomaty amerikanina : Manjavozavo ny raharaha -
AccueilSongandinaDiplomaty amerikanina : Manjavozavo ny raharaha
Mbola tazonina hanaovana fanadihadiana eny anivon’ny zandrimariam-pirenena, ilay lehilahy voarohirohy ho namono nahafaty ilay teratany amerikanina teny Ambohibao. Araka ny fitantaran’ny olona teny an-toerana, dia isan’ny nitazonana ity lehilahy ity ny porofo hita teny aminy nandritry ny faty olona. Raha ny fantatra mantsy dia nihoson-drà tanteraka ny akanjon’ity teratany malagasy ity, ary nitsambikina ny varavarankely izy no nifanehitra tamin’ny zandary nanao fisafoana teny an-toerana.
Tsilian-tsofina no nahalalana fa io tovolahy voasambotra io no niaraka tamin’ity teratany amerikanina ity nisotrosotro, tany amin’ny toeram-panaovan-danonana iray, 50 kilometatra miala ny trano fonenany. Ireo olona ireo no nilaza fa efa mpandeha ao amin’io toeram-pisotroana io ity farany, ka nifanena tamin’ity teratany malagasy. Araka ny fanazavana voaray, irony lehilahy mifankatia amin’ny lehilahy irony ilay diplomaty. Nisy naheno fa tamin’ny misasak’alina izy ireo no niditra ny trano.
Tsy fantatra mazava kosa izay tena nitranga io alina io, raha efa ny vata mangatsiakany no hita ora iray taorian’izay. Andrasana araka izany ny famotorana ataon’ny mpitandro filaminana momba ity raharaha ity. Ho fantatra aorian’ny “autopsie” ihany koa ny fomba namonoana azy.